မေး။ အကြောက်လွန်စိတ်ရောဂါအကြောင်း သိချင်ပါတယ်ဗျ။ ရောဂါနဲ့ပက်သက်ပြီး ဘယ်လိုနေထိုင် ပြုမူသင့်ပါသလဲ။ နောက်ပြီး Zosert ၅၀ ဆေးအကြောင်းလည်း သိချင်ပါတယ်။ ဖြေကြားပေးစေချင် ပါတယ်ဗျ။ ကောင်ကလေး (FB) ဒေါက်တာဦးအုန်းကျော် စိတ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန်ကြီး(အငြိမ်းစား)ဖြေကြားသည်။ ဖြေ။ ကိုကောင်ကလေးရဲ့ မေးခွန်းအတွက် ကျေးဇူး တင်ပါတယ်။...
အဖြူဆင်းပြီး အနံ့မကောင်းဘူး . . .
မေး – အဖြူအရည်တွေဆင်းပြီး အနံ့က သိပ်မကောင်းဘူး။ တစ်ခါတလေ ဆေးနံ့လို အနံ့ရတယ်။ ဘာလို့လဲ မသိဘူး။ မြတ်ကေကြူ Fb # ဒေါက်တာစိုးလွင်(သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားသည်။ ဖြေ – မိန်းကလေးတွေမှာ အဖြူဆင်းတာ သဘာဝပါ။...
– ခွေးရူးရောဂါပိုး ထိတွေ့မှုမရှိအောင် နေထိုင်ပါ။ – ခွေးရူးပြန်ရောဂါဖြစ်ရတဲ့ ၉၆ ရာခိုင်နှုန်းက ခွေးကိုက်ခံရတာကြောင့် ဖြစ်တာပါ။ ခွေးကိုက်ခံရပြီး ခွေးရူးပြန်ရောဂါဖြစ်ကာ သေဆုံးမှုကလည်း အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခွေးကိုက်မခံရအောင်ကာကွယ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ – အိမ်မွေးအချစ်တော်တိရစ္ဆာန်လေးတွေဖြစ်တဲ့ ခွေးနဲ့ကြောင်တွေကို တိရစ္ဆာန်အထူးကုဆရာဝန်ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း...
ခရီးသွားတိုင်း ဘေးအန္တရာယ် ကင်းဝေးစေမည့် နည်းလမ်းကောင်းများ
(၁)- အစာမစားခင် လက်ကို သေချာ ဆေးကြောသန့်စင်ပါ။ (၂)- ရေသန့်ကိုသာ သောက်ပါ ဒါမှမဟုတ် ကျိုချက်ထားတဲ့ ရေကို သောက်ပါ။ (၃)- တတ်နိုင်သမျှ ရေခဲမပါတဲ့ အရည်ကို ရွေးချယ် သောက်သုံးပါ။ (၄)- ဘယ်တော့မှ ဘုံဘိုင်ရေနဲ့ သွားမတိုက်ပါနဲ့။...
အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသားတို့ စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းမွန်စေမည့် နည်းခြောက်သွယ်
၊ ကိုထက် ၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာ အမျိုးသားစွမ်းဆောင်ရည် မြင့်တက်စေဖို့ရာအတွက် ကျန်းမာတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ရပါမယ်။ ချစ်စိတ်ကို နိုးကြွစေပြီး စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းမွန်စေမယ့် နည်းတွေကို သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုတွေက ဖော်ပြထားပါတယ်။ (၁) ပြီးပြည့်စုံသော အိမ်ထောင်မှုဘ၀က ကောင်းမွန်သည့် အာဟာရပေါ်တွင် မူတည်နေ အာရုံကြောလုပ်ငန်းဆောင်တာ...
အသက်အရွယ်အလိုက် ကလေးကိုတောက်တိုမယ်ရ ခိုင်းသင့်သည့် အလုပ်များ
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကလေးတွေကို အရွယ်အလိုက် အိမ်အလုပ်လေးတွေ ကူညီလုပ်ဆောင်ခိုင်းတဲ့အခါ ကလေးတွေက သူတို့ကိုယ် သူတို့အားကိုးပြီး တာဝန်သိစိတ်ပိုရှိလာစေပါတယ်။ အသက် ၂-၃ နှစ်အရွယ် ကလေး – အရုပ်တွေနဲ့ စာအုပ်တွေကို ကောက်ခိုင်းလို့ရနေပါပြီ။ သူကစားပြီးတဲ့ အရုပ်တွေ၊...
သူတို့ ဆေးလိပ်ပြတ်သလို သင်လည်းလုပ်နိုင်မှာပါ . .
၊ ဇွန် ၊ သင်က ဆေးလိပ်သောက်တတ်သူလား၊ သင်တစ်ယောက်တည်း ဆေးလိပ်သောက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာကျော်တချို့လည်း ဆေးလိပ်သောက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့က စွဲလမ်းစေတဲ့ဆေးလိပ်ကို ပြတ်အောင်ဖြတ်နိုင်ခဲ့သူတွေပါ။ သူတို့ကိုဆေးလိပ်ပြတ်ဖို့ လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တဲ့အချက်တွေကို ကြည့်ရင်း သင်လည်းဆေးလိပ်ဖြတ်ကြည့်ဖို့ အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။ – အမာခမ်း (Aamir Khan) ၂၀၁၁...
– နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါက အမျိုးသမီးတွေကို အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်စေတဲ့ ထိပ်တန်းရောဂါတစ်မျိုးပါ။ – သင်ရဲ့စားသောက်တဲ့ပုံစံကို ပြောင်းလဲလိုက်တာကြောင့် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက်တစ်နေ့မှာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ သစ်သီးဝလံကို ရှစ်ကြိမ်စားရပါမယ်၊ တိရစ္ဆာန်အဆီနဲ့ အခန်းအပူချိန်မှာ ခဲသွားတဲ့ဆီတွေကို ရှောင်ရပါမယ်၊ ထပ်ခါတလဲလဲပြန်ကြော်ထားတဲ့ ပြန်ကြော်ဆီကို ရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။...
မေးရိုးက နေရင်းထိုင်ရင်း ဂွပ်ခနဲဖြစ်သွားတယ်. .
မေး. မေးရိုးက နေရင်းထိုင်ရင်း ဂွပ်ခနဲဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်၊ တစ်ခါတလေ အစာတောင်စားလို့မရဘူး။ ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲဆရာ။ ဂျက်စမင်၊ မန္တလေး။ ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင် (မေးရိုးနှင့် ခံတွင်းခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. ဒါက မေးရိုးကဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အောက်မေးရိုးမှာ အဆစ်ဆိုတာရှိပါတယ်။ အဆစ်ဆိုတာ ညာရော ဘယ်ပါ ရှိပါတယ်။...
Page 541 of 624« First‹ Previous537538539540541542543544545Next ›Last »